अब उनको आँखामा पनि वासनाको भूत चडिसकेको थियो । मैले उन्लाई उठाएर काखमा राखे - Kathmandu Online
नया बर्षको अघिल्लो दिन ! हाम्रो परिवार नया बर्ष मनाउन गाउँ गयेको थियो । एक्लै घरमा थिए ; दिनभर त यताउता घुमघाममै बित्यो तर राती एक्लै के गर्नु र नेपाली कन्छी को site हेर्दै मस्ती गर्दै आनन्द लिदै बसे ! त्यै समयमा केही सेक्स_च्याट गरेर आफ्नो लिङ्गलाई शान्त पारेर सुतेको थिये ! कोठाको सानो light खुल्लानै थियो ! हाम्रो मिनि size को घर छ अनि मेरो झ्याल side पट्टि खाली plot मा मकै लगाएको थियो छिमेकिले ! गर्मी ज्यादा भएर झ्याल पुरै खोलेर सुतेको थिए । सुत्नु अगाडी woofer मा senti song play गरेको थिए ! कतिबेला बन्द भयो थाहा पाइन । यतिकैमा निदाएको बेला अचानक झ्यालको रडमा केही ठोकिएको आवाजले निन्द्रा खुल्यो । येस्तो लाग्यो झ्याल बाहिर कोहि छ; एक्लो भएकोले गर्दा मनमा डरले चिसो भयो र चुपचाप आवाज ननिकालिकिन सुतिरहे । मेरो #mobile मेरो अगाडी झ्यालको छेउमै थियो र म झ्याल पट्टि नै फर्केको थिये ।
करिब दुई मिनेटमा झ्याल बाहिर कसैको आकृती देखे । अब डर बढ्न थालेको थियो सायद म ठुलो आवाजले कसैको मद्दतको लागि कराउने थिये होला तर मेरो त्यो कोठाको उज्यालोमा परेपछी त्यो मान्छेनै हो भन्ने #confirm भए । म को हो भनेर बोल्नै लागेको थिए अचानक झ्यालको आउदा केटी रहेको र उस्को अनुहार जानपहिचानको जस्तो लाग्यो ।
अनि मनमा खुल्दुली र कौतुहलता हुन थाल्यो यो रातमा किन यहाँ होला को सङ्ग होला कतै #bf सङ्ग होकि भन्ने सोच्न थाले । म उस्लाई नियालेर हेरिराको थिये light को उल्टो पट्टि भएर होला मेरो अनुहारमा उज्यालो थिएन र म जागिसकेको उसलाई पत्तै भएन । उ क्रमश नजिक आउदै थिइ झ्यालको छेउमा आयेपछी उस्लाइ मैले प्रष्ट देख्न पाए र उसलाई चिने ! उ हाम्रै #area मा डेरा गरेर बस्थी #student थिइ । सायद एक दुई पल्ट बोलेको थिए । अचम्म मान्दै थिए यो बेला उनलाई यहा देख्दा तै पनि मन रोमान्चित हुँदै थियो । सोच्न मात्र लागेको थिए के गरौ बोलाउ कि नबोलाउ भनेर उसलाइ notice गर्न पुगेछु । उ मेरो फोन नियालेर हेर्दै थिइ तब मलाई उस्को इरादा पत्ता लगाउन time लागेन । यतिकैमा उस्ले एउटा हात आधा भित्र छिराएर फोन तिर लागि तर फोन भेटिन अनि हात निकाली । मैले सोचिसकेको थिए फेरि हात हाल्दा म समाउछु भन्ने । एक्छिन पछि उस्ले फेरि हात हाली पुरै हात हल्दा फोन भेट्न लागेको थिइ मैले अचानक उस्को हात समात्न पुगे ।
उ आत्तिएर हात छुटाउन खोजी तर मैले एक्दमै कसेर पक्डेको हुदा छुटाउन सकिन उ रुन थालेकी थिइ मैले त्यही मौकामा फोन बाट45 pic लिए । उ के गरौ कसो गरौ भकी थिइ मैले आवाज गरेर मान्छे बोलाउछु भन्दा बिन्ती केइ नगर्नु माफ गर्दिनु मेरो बेइजत हुन्छ भन्न थाली । मैले पनि मैल्र भनेको मान्छौ भने केइ गर्दिन नत्र गयेपछी पनि म सङ्ग photo छ जे पनि गर्न सक्छु भनेर हात छोडिदिए । उसले भनी केइ नगर्दिनु please भन्न थाली मैले पनि मौका मा चौका हान्ने सोच बनाको थिए अनि मैले भनेको मान्छौ भने म photo delete गर्दिन्छु भने । उस्ले के भन्नू मान्छु भनेपछि भित्र आउ भने उस्ले सुरुमा त नाइ भनी तर मैले त्यै कुरा भनेपछी भित्र आउछु भनी । मैले ढोका खोलेर उसलाई भित्र लियेर आये अनि उसले फेरि pic dlt गर्न आग्रह गरि ।
मैले उसलाई आज म सङ्ग सुत्न भने तर उसले रुदै नाई भनी मैले एक्छिन आग्रह गर्दा पनि नमानेपछी उसलाई बाहिर बाहिरको काम मात्र गर्छु भन्दा हुन्छ भनी । मैले उसलाई बोकेर उठाए अनि खाटमा बसाए अनि बिस्तारै गालामा किस गरे । उ अझै रुदै थिइ अनि मलाई अगाडि बढनु मन नै लागेन । मैले उसलाई सम्झाउदै भने – हेर गल्ती तिमिले गरेको छौ मलाई केही नराम्रो गर्नु छैन ; एक्छिन साथ देउ म यो कुरा कतै जान दिदिन । उसले पनि हुन्छ भनी अनि मैले सिधै ओठमा किस्स गर्न थाले अनि अङालो मार्दै ढाड सुम्सुम्याउन थाले । एक्छिन पछि उसले पनि हल्का साथ दिन थाली ।5मिनेट जति भएको थियो होला उसले अब भयो भन्दै उठेपछि मैले अरु केही गर्नु छ भने । तर उसले इन्कार गरि । मैले नि वासनाको आबेगमा उसलाई फेरि धम्की दिए अनि भने मानेनौ भने जबर्जस्ती इज्जत लिन्छु मानेउ भने एक्छिन पछि छाडिदिन्छु । उनी फेरि बसिन अनि म पुनः सुरु भए।
येस्पाली मैले उनको छाती तिर हात लैजान थाले । उनी मेरो हात हटाउने कोसिसमा थिइन तर सकिनन मैले उन्को दूध माड्न थाले उनी अझै नाकाम कोसिस गर्दै थिईन । उन्ले गाढा निलो रङ्गको tshirt अनि लामो रंगीचंगी skirt ; रातो ब्रा अनि सायद प्याजी रङ्गको panty लगायेको थिइन । मैले उन्को हात हटाएर tshirt माथी सरेर ब्रा बाट दुख खेलाउन थाले उ tshirt तल तान्दै थिइ तर मैले सख्त गरि दूध समाएको थिए । एक्छिन पछि मैले tshirt खोलिदिए उनी केइ नगर्नु भन्दैथिइन अझै सम्म मैले बहिर बाहिर मात्र गर्छु भनेकोले हात खुला बनाइन अनि मैले ब्रा बाट दूध निकालेर चुस्न थाले । कोमल कोमल उस्को दूध साना साना nipple सारै आनन्द आउदै थियो । मैले बिचार गर्दै थिए उन्को श्वास पनि बदलिदै थियो उनी खुलेर मलाई दूध चुस्न दिइरहेको थिइन । मैले त्यही मौकामा पछाडिबाट उन्को ब्रा को हूक खोलिदिए ।
अब उनको आँखामा पनि वासनाको भूत चडिसकेको थियो । मैले उन्लाई उठाएर काखमा राखे उनी अझै स्तनपान गराएर आनन्द मान्दैथिइन । मैले उसको skirt उठाएर हात भित्र हाले अनि panty सम्म पुर्याए । उसले अचानक मेरो हात दबायेर अगाडी बढनु दिइनन । मैले हात हटाएर पुनः tounge किस गर्दै उन्को जिब्रो खेलाउदै दूध माड्न थाले उनी मस्त भएर मज्जा लिदैथिइन । मैले एकपटक फेरि दूध चुस्दै nipple जिब्रोले खेलाउन थाले उनी स्वा स्वा गर्दै लामो लामो सास फेर्‍दै मेरो टाउको समाएर आफुतिर तान्दै थिइन। मैले पुन हात skirt भित्र हालेर panty मा पुर्याए; panty पुरै गिलो भको रहेछ । अब म अगाडी बढनु सक्ने जस्तो लागेपछी मैले panty भित्र हात हालेर पुति मा छामे पुरै पानी पानी भएको रहेछ । मेरो हात पर्नासाथ उनी आतियेर झसङ्ग भयिन मैले तुरुन्त दूध चुस्न थाले अनि पुति मा औलाले चलाउन थाले । अनि मैले साथमै panty एक हातले खोलिदिए र skirt पनि तल सारेर खुट्टामा पुर्याइदिये । कस्सम यति सुन्दर लागेको थियो नि त्यो बेला उस्लाई बर्णन गर्न नै सक्दिन म । मैले उसको पुतिमा औला छिराउनासाथ उनको लामो सिस्कारी निस्कियो आह्ह्ह…….
उनी उत्तेजित हुदैथिइन र म त अत्ति नै उत्तेजक थिए। मैले औलाले चिक्न सुरु गरे उनी मलाई अङालोमा कस्दै थिइन । एक्छिन पश्चात् अचानक उन्को हात मैले मेरो trouser मा पाए। उनी लाडो खेलाउन इच्छुक थिइन म झनै उत्तेजित भएर पुति मा fingering गर्न थाले । उनले मेरो लाडो निकालेर हात ले तल माथी गर्न थालिन। यतिकै मा मैले उसलाई bed मा सुताए अनि पुति तर्फ मुख लिएर गये उसले हातले छोपेर taste गर्न रोक्दै थिइ । मैले उस्को हात बिस्तारै हटाएर हेरे अलि अलि रौ आएको थियो सायद mongolian भएर होला पुति clean थियो । मैले ढिलो नगरी पुतिमा मुख जोदिदिये उ हल्का आवाज निकालेर उइ आह गर्दैथिइ । मैले पुति चुस्न सुरु गरे अनि दुलो खोलेर जिब्रो छिरौन थाले । एक्छिन पछि उ आह उउ आह जस्ता आवाज ज्यादा नै निकाल्नु सुरु गरेपछी मैले पुति चुस्न छोडेर मेरो सबै कपडा खोले अनि उसलाई लाडो पक्डाए र चुस्नु को लागि भने ।
उ इन्कार गर्दैथिइ मलाई मन पर्दैन येस्तो घिन लाग्छ भन्दै थिइ मैले उस्लाई एक्छिन मात्र भनेर convince गराए अनि म पुति चुस्न लागे । हामी 69 position मा थियौ म उस्को पुति चुस्दै थुए उ पनि हल्का मेरो लाडोको तुप्पो मा जिब्रो ले चाट्दै हटाउदै थिइ। मैले पुति म जोर जोर ले चुस्न अनि जिब्रो छिराउन थाले उस्ले पनि अब अत्ति सहन गारो भएर लाडो पूरा मुखमा हालेर चुस्न थाली । एक्छिन पछि मैले चुस्न छोडे अनि उठ्न लागेको।थिए तर उ अझै लाडो मजाले चुस्दै थिइ मैले नि पुति चलैदिन थाले। अनि2मिनेटमा उस्ले लाडो निकालेर लामो लामो सास फेर्न थाली । अब उ मलाइ आफू तिर तान्दै मेरो खुट्टा तल धकेल्दै थिइ। मलाइ बिस्वस्त भयो अब उ चिक्न चाहन्छे अनि म पनि उठेर सिधा भयेर उस्को माथी आए अनि दूध चुस्न थाले। उ मेरो लाडोमा समतेर आफै।पुति मा जोडने प्रयासमा थिइ यतिकै मा मैले सोधे के भयो?? उसले सानो स्वरमा भनी । अब सहन सक्दिम गर्नु न चाडो ।
मैले सोधे के गर्नु baby उसले भनी सेक्स । मैले फेरि सोधे के गर्नु रे उसले भनी सेक्स। मैले फेरि सोधे के रे उस्ले तब भनी चिक्नु न मलाइ छिटो म control गर्न सक्दिन । मैले यो सुन्नसाथ मेरो लाडो लगेर पुति मा छुवाइदिए अनि हल्का रगड्दै सोधे अगि केइ नगर्नु भनेको हैन ? उसले भनी गल्ती भयो अब नतड्पाउनु मलाई छिटो चिक्नु प्लिज प्लिज भन्दै मेरो कम्मरमा पक्रेर आफै छिराउने प्रयास गर्न थाली । मैले बिस्तारै धक्का दिए टुप्पो छिरेपछी उस्ले ऐय्या भनी अनि मैले सोधे पैले कहिले चिकेको थियेन तिम्ले? उसले भनी college को canteen मा bf ले last period मा2दिन चिकेको तर एक्छिन एक्छिन मात्र हतारहतारमा गरेको अनि उस्को सानो थियो तपाईंको ठुलो छ so दुख्दैछ । मैले पनि उसको कुराले रोमान्चित हुँदै मुख्मा किस्स गरेर एक धक्का दिए।
पनि पानी भयेको पुति भएनी tight भएकोले आधामात्र छिर्यो । उन्को चिच्याहट मेरो मुखभित्र नै सिमित रह्यो तर आँसु आउन सुरु भएको थियो उन्को । मैले एक्छिन रोकेर दूध चुस्न थाले । एक्छिन पछि उनी आफै मलाई कम्मरमा समाएर धक्का लगाउन भन्दै थिइन । मैले बिस्तारै बिस्तारै निकल्दै हाल्दै गरेर अलिक भित्र भित्र छिरौदै गए ।
अब मैले लग्भग लाडो पुतिमा पुरै छिराइसकेको थिए अनि बिस्तारै चिक्दै थिए । उ पनि उत्तेजक भएर साथ दिन थालेको थि । हामी हाम्रै रतिकृडामा मस्ती लिदै थियौ । उ पनि मस्त मस्त आवाज निकालेर आह आह आह उम्म उम्म उम्म गर्दै थि। मैले फोन उठाएर घडीमा हेरे4बज्न लागेको रहेछ । अनि फोन को उज्यालो light जलाएर उस्को अनुहार अनि पूरा शरीरमा हेरे माकस्सम अत्यन्त कामुक देखेकी थि ; उ लजाएर सिधा हेर्न सकेकी थिएन। मैले light off गरेर पुन चिक्न सुरु गरे । उसले एक्छिन पछि भनी बसेर गरुम न !
मैले सोधे expert छौ कि के हो?? उसले भनी हैन video मा हेरेको अनि bf ले नि बसेर गरेको । मैले पनि ल भनेर छेउ को सोफामा म बसेर उसलाई बस्न लगाए। उ मेरो लाडो मा पुति मिलाएर म पट्टि फर्केर बसि । लाडो पुरा छिर्नासाथ उ मच्चिन थाली म तलबाट साथ दिदै मजा लिदै थिए । केही समय पछि उस्ले साबिकको भन्दा तेज तेज गरेर उफृन थाली शनि मलाइ पनि जोर ले अङालो मारेकी थि । उस्को पानी निस्केछ पुति बाट लाडोमा तातो पानी आयेको फील भयो । अनि उस्ले आफ्नी जिउ मलाई छाडेर लल्याकलुलुक भइ । मैले उस्लै बोकेर बेद म सुताए अनि बिस्तरै चिक्न थाले । उ भन्दै थि नरोकिकिन गरिरनु ल मज्जा आउदैछ मलाई ।
म चिक्दै थिये आवाज आइरको थियो प्यात प्यात प्यात अनि bed को चुइ चुइ । उस्लाई फेरि उत्तेजना आयेछ तलबाट मच्चिन थाली फेरि । मैले पनि उस्लाई घोप्तो पारेर मेरो मन पर्ने doggy @position मा राखेर लाडो पछाडिबाट छिराइ चिक्न थाले । उ केवल आह अह स्स्स्स स्स्स्स गर्दै मजा लिदै थि । यसरी चिक्दा चिक्दै एकपटक फेरि उसको पानी निस्कियो उ निढाल भएर फेरि सुति । मैले उसलाई पुन उत्तेजनामा ल्याए अनि सुताएर चिक्न थाले । उस्ले अब छिटो छिटो गर्नु उज्यालो हुन लाग्यो जानुपर्छ भनेपछी मैले पुरा जोर लागाएर चिक्न थाले । उ अझै सरो अह्ह आह साह्रो चिक्नु love u । मेरो बुढा I love u । येसरी नै सधै चिकिरनु मलाई सबै तपाइकै हो वन्दै थिइन अनि घरी ऐया दुख्यो भन्दै। म पनि धेरै चरम बिन्दु मा पुगेको थिए त्यही बेला उस्को तेस्रो पटक पानी निस्किन लागेछ मलाई जोरले पक्रेर काम्दै काम्दै साह्रो चिक्नु भन्न थालिन ।
मेरो पनि निस्किन लागेको थियो so मैले पनि full emotion मा धक्क दिदै चिक्न थाले। त्यतिकै मा उन्को कडा आलिङ्गन सहित पुति बाट स्खलित भएको पानी मेरो लाडोले महसुस गर्यो अनि त्यसको केहिछिन मा मैले पनि उस्लाई जोरले समायेर चरम्त्कोर्स मा पुग्दै चिक्दा चिक्दै लाडो पुति भित्र नै स्खलित हुन पुग्यो । केही समयसम्म म उन्को जिउमाथी नै लडिरहे । एक्छिन पछि उठेर कपडा लगाउन थालेउ हामी दुबै । उनले डर मिस्रीत स्वरमा भनिन – भित्रै निकाल्नु भयो मलाई केइ भयो भने?
मैले उनलाई सान्त्वना दिदै भने tension# नलेउ म भरे दबाई ल्याइदिन्छु 72hr वाला खानु केइ हुदैन । अनि मैले सोधे किन चोरी गर्ने आवस्यक पर्यो? उन्ले tuition का लागि राखेको 3500 पैसा हरायो । भोलि तिर्नुपर्ने manage गर्नै सकिन त्यै भएर येस्तो गर्न बध्य भए । मैले उसलाई new year celebrete गर्न राखेको 5000 बाट 4000 दिदै भने ल राख मलाई आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र कसैको फाइदा उठाउन मन पर्दैन । उसले thank you भन्दै राखिन । त्यो दिन मेरो पनि नया बर्ष मनाउन गाउँ जाने प्लान थियो ।
तर मेरो दिमागमा अरुनै कुरा खेल्दै थ्यो। मैले उसलाई भने आज को night एक्लै छु whole night म सङ्ग बिताउ ल? उसले पनि हुन्छ अब जान्छु भरे call गर्नु अनि आउछु भनेर number दियेर पछाडी को बाटो बाट निस्केर गैइ । मैले पनि night को लागि केही drinks अनि खाना ready गरेर एउटा econ लिएर आए । अनि करिब 8 बजे उसलाई बोलाये । करिब 8.45 मा आइ उपनी । मैले हाम्रो रात्रीको लागि सबै कुरा ready गरेको थिए। मैले उसलाई भने आजको रात हामी श्रीमान् श्रीमती अनि आज हाम्रो हनिमून । उ पनि लजाउदै ok भन्दै थिइ । केही पछि drinks र खाना साथमा खाएर हामिले पूरा रात मज्जा गर्यौ ।4चोटि चिके मैले उसलाई त्यो रातमा । बिहान5बजे तिर उसङ्ग केही प्रेमलिला गरेर मैले उसलाई आफ्नै हात्ले दबाई खुवाए अनि मौका मिल्नासाथ भेट्ने बाचा गर्दै उसलाई बिदा गरे । ऐले उ आफ्नै कोठामै बोलाउछे तर मलाई घरबाट हिंड्न समस्या पर्ने हुनाले पुन मौकाको पर्खाइमा छु र चिक्दा लिएका फोतो हेरेर आनन्द लिने गर्दछु ।
यो थियो मेरो नया कथा ।